October 15, 2019 - Myitter
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုးပေါက်မှဝင်ရောက်လာသော ရဲတပ်ဖွဲ့အယောင်ဆောင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၅ ဦးအားဖမ်းဆီး လိုက်ပါပြီ…..
October 15, 2019 Myitter 0
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုးပေါက်မှဝင်ရောက်လာသော ရဲတပ်ဖွဲ့အယောင်ဆောင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၅ ဦးအားဖမ်းဆီးရမိ လောက်ကိုင် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရှမ်ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင်မြို့နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ခိုးပေါက်မှ ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အယောင်ဆောင်ထားသူ တရုတ်နိုင်ငံသား ၅ ဦးအား အောင်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ၄ […]
ရွှေတိဂုံစေတီတော်နဖူးမှာ သိုက်တူးတဲ့ မိုက်တဲ… ဖူးခက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ လေးမိုင်လောက်အကွာမှာ အတော်မြင့်တဲ့တောင်ကုန်း တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီတောင်ရဲ့နာမည်က ခေါင်ရန်းတဲ့။ခေါင်ရန်းတောင်ထိပ်မှာတော့ ဖူး ခက်မြို့ကို ဖြန့်ကျက်စိုးမိုးထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာကို တွေ့ မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအရ တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်တွေမှာ စိုက်ထူ ထားတဲ့ တာဝါတိုင်တွေဟာ ချိတ်ဆက်မှုအားပိုကောင်းစေလို့ပါပဲ။အရပ်စကားနဲ့ဆိုရင် လိုင်းပိုမိတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ရဲ့တာဝါတိုင်တွေကိုတောင်ကုန်း၊တိုက်မြင့် […]
သိကြားမင်း ရှိခိုးခံထိုက်တဲ့သား မိခင်အား ဥပုသ်စောင့်သီလဆောက်တည်နိုင်ရန်စမ်းရွှေညောင်ပင်ကျောင်းတိုက်သို့ ကျောပိုးပီးပို့ဆောင်နေတဲ့သားအားလေးစားသာဓုခေါ်မိပါတယ်…… crd Ref Oo Ye Htut Oo Ye Htut Gyi မိဘကျေးဇူးကိုသိပြီး ကျေအောင်ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုရင် လောကမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ( ရွှေ ငွေ စသည်ပေါ့လေ)တောင်ပုံရာပုံ ပုံပြီးပေးပေမဲ့ မိဘကျေးဇူးမကျေပါဘူးတဲ့။ သားသမီးတွေက […]
အသက်ဝင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ပုံတူ ပန်းချီကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ညီမငယ်လေး…
အသက်ဝင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ပုံတူ ပန်းချီကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး သူမ၏ ပန်းချီပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်ဒိထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြားပါစေ သမီးရေ အသက်ဝင်ပီပြင်လွန်းပါပေတယ်ညီမလေးရေ .. လက်ရာမြောက်စွာ ဖောကြူးထားတဲ့ ဒီညီမလေးရဲ့ စွမ်းရည်ကို အသိမှတ်ပြုတယ် လေးစားတယ်ဆို ရှယ်ပေးသွားနော်…. ညီမလေး ဒီထက် ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ရာတွေ ကို ပုံဖော်နိုင်ပြီး […]
ငါရှာထားတဲ့ငွေနဲ့ ဖုန်းဘေဖြည့်ပြီး ထိုင်ဆဲမယ် လာထားးးး တခုတော့ကြိုပြောပါရစေ အားမှ ပြန်ပြန်ဆဲမယ် နော်
ရိုင်းတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေတင်ခိုင်းတဲ့ သူကို ပေါက်ကွဲနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက် ဇေရဲထက် ရိုင်းတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတင်ခိုင်းတယ်နော်းးးဟားးးးးး ကျနော့်ဘဝမှာ အခုဟာ အရိုင်းဆုံးပဲးး (1)ကိုယ့်ဝေါမှာ ကို့ဘာသာ စာနာစိတ်နဲ့ ခံပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတုယူမမှားဖို့ ရေးတင်တဲ့စာ ကို လာပြီးရိုင်းဆိုင်းစွာဆဲတယ်းငြိမ်ခံပေးတယ် (၂)ကျနော့်ဖန်လေးတွေက ဖျတ်လိုက်အမုန်းပွားနေမယ်ဆိုလို ဖျတ်ပေးမိတယ်းးးဒါလည်းလာရိုင်းတယ် (၃)တောင်းပန်စာတောင် မမှားပဲတောင်ပန်တယ် […]
One Championship ကဖိုက်တာတွေကို ထိုးကြေးငွေ ဘယ်လောက်ပေးသလဲ၊ ရသလဲ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ထား ပါတယ်။ သွားလည်း မမေးပါနဲ့။ လေကုန် ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း မဖြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် အောင်လ ဘယ်လောက်ရလဲ အတိကျ မသိပါဘူး။ One Championship ကနေ […]
One က အောင်လကို ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ဂုဏ်ပြု
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့်MMA (OneChampionship) ပြိုင်ပွဲတွင် အမေရိကန်-ဖိလစ်ပိုင်ဖိုက်တာ ဘရန်ဒန်ဗီရာကို အလဲထိုးအနိုင်ယူပြီး လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည့် အောင်လအန်ဆန်ကို One က ဂုဏ်ပြုငွေ ကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်းချီးမြှင့်ခဲ့သည် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ Ryogoku Kokugikan ဆူမိုအားကစားခန်းမ ၌ […]
အောင်လအန်ဆန် UFC မှာ သွားပြိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေး အောင်လအန်ဆန်ကို UFC မှာ မြင်ချင်တယ်တို့၊ ခါဘစ်နဲ့ ထိုးစေချင်တယ်တို့ ပြောနေကြတာတွေ တွေ့လို့ ဒီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ သဘော သဘာဝနဲ့ ဝိတ်တန်းတွေ အကြောင်း နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြချင်တယ်။ အရင်ဆုံး ပြောပြ ချင်တာက UFC ဆိုတာ […]
မီးပုံးပျံနှင့်အတူဆိုင်ကယ် ကံစမ်းမဲ ထည့်ပေးထားရာမှဆိုင်ကယ်ကံထူးရှင်ထွက်ပေါ် ကျိုက်ထို၊အောက်တိုဘာ ၁၄ ဇေယျာဦး(ကျိုက်ထို) Media Top (OnlineNews) . မွန်ပြည်နယ် ၊ကျိုက်ထိုမြို့ ၊ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဘုရားသုံးဆူတောင် ဘုရားသုံးဆူကျောင်းတိုက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ထိုင်တော်မူဘုရားကြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲနှင့် မီးပုံပျံ လွှတ်တင်ပူဇော်ပွဲတွင် စိန်နားပန် မီးပုံးပျံနှင့်အတူ လိုင်စင်ပါ ဆိုင်ကယ် […]
အောင်လအန်ဆန်အားအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပယ်ဖျက် 14.10.2019 ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း နယူးယောက်မြို့တွင်ကျင်းပသော လူထုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၌ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် က One တိုက်ခိုက်ရေးအကျော်အမော် အောင်လအန်ဆန်းအား အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များနှင့် အမေရိကန်လူထုအားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတထရန့် အောင်လအန်ဆန်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းထိုးသတ်သေပွဲများ၌ အခြားနိုင်ငံ တစ်ခု၏အလံ (မြန်မာနိုင်ငံအလံ) လွမ်းခြုံ၍အောင်ပွဲခံ နေခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ကြောင်းနှင့် […]